Dagaalo lagu Khasaaray
Xadhadhanka, 1 Mar 2014(Alldhooftinle.com)
Dagaalkii ka dhacay Kuuriya bilowgii kontomeeyadii ee Shiinuhu ka guuleystey Mareykanka waxay keentay in Shiinuhu awoodiisa mahadiyo oo isla baxo, dabadeedna Madaxweynihii Shiinaha Mao wuxuu 1957kii u diray ciidamadiisa inay la wareegaan laba gobol oo ay ku muransanaayeen Midowgii Soofeeti iyo Shiinaha. Laakiin Mao wuxuu ilaaway in aanu Midawga Soofiyeeti la mid ahayn Maraykanka marka dhinacyo badan laga eego.
Dagaalkaas oo socday mudo ka yar 24 saacadood waxaa si xun looga adkaaday Shiinaha, dhulkii muranku ka taagnaana waxaa la wareegey Midowgii Soofeyeti. Jabkaas Shiinaha ku dhacay wuxuu ka qosliyey Hindiya oo muda badan dooneysay inay Shiinaha ka saarto gobolka Ladakh oo ku yaala buuraha Himalaya. Hindidu waxay bilaabeen inay ciidamo u diraan xuduuda isla markaana taageeraan mucaaradka Shiinaha ee gobolka Tibet, waxay kaloo magangelyo siiyeen Dalai Lama oo ah hogaamiye diimeed oo Shiine ah.
Arimahaa Hindidu sameeyeen waxay xumaysay xiriirkii labada dal. Waxaa qarxay dagaal culus bishii Oktoobar 1962kii. Dagaalkaas oo bil socday waxaa cashar lama ilaawaan ah loo dhigay Hindiya. Waxaa laga qabsaday maxaabiis fara badan, dhulkii laysku heystay waxaa si fudud ula wareegey Shiinaha, waxaana Hindiya qasab ku noqotay inay barido xabad joojin.
Sida dagaalkaa Hindiya iyo Shiinaha dhexmaray u dhacay waxaa ku farxay Pakistan oo weligeed jeclayd inay aragto hindiya oo jilbaha dhulka loo dhigay. Pakistan waxay go'aansadeen inay markan ka gacan sareyn karaan Hindida, isla markaana waxay bilaabeen inay u diyaar garoobaan dagaal ay hindiya ku kala baxaan. 5tii Agoosto 1965kii ayaa madaxweyne Ayuub Khan oo Pakistan xukumayey amar ku siiyey ciidamadiisa inay ka gudbaan xuduuda Kashmiirta Hindiya, isagoo rajaynayey guul degdeg ah.
Dagaalkaas oo bil socday waxaa guuleystay Hindiya, inkastoo Pakistan uu u ahaa guul xaga niyadda ah marka loo eego afartii dagaal ee ay hindiya la gashay oo dhamaantood si xun loogu bahdilay Pakistaan. Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa intaadan falin ka fiirso. Madaxda wadamadaa aan soo sheegnay miyey il duufeen mise waa ugu tala galeen jabka ku dhacay cidamadooda.